San Diego: UDSE, oo Hamlayo u Diray Xisbiga ESPDP, ee Degaanka Somalida Ethiopia – Rasaasa News
Jun 27, 2011 ee haya talada Dawlada Deegaanka Somaalida Ethiopia., Ururka Dhallinyarada Somalida Ethiopia ee SanDiego, wuxuu hambalyo iyo taageero u dirayaa Xisbiga ESPDP
Ururka Dhallinyarada Somalida Ethiopia ee San Diego, wuxuu hambalyo iyo taageero u dirayaa Xisbiga ESPDP, ee haya talada Dawlada Deegaanka Somaalida Ethiopia.
Ururka Dhalinyaradu wuxuu ug hambalyeynayaa Xisbiga ESPDP sanad guuradii 13 ee ka soo wareegtay aas aaska xisbiga, waxaa kale oo aan ugu hambalyeynaynaa wax qabadkiisa ku aadan dalka iyo dadka.
Deegaanka Somaalida Ethiopia waxa uu soo maray marxalado badan oo kala duwan. Xisbiga talada haya wuxuu geed dheer iyo geed gaabanba u fuulay sidii uu wax uga badali lahaa xaalada deegaanka ka jirtay.
Waxaanu maanta odhan karaa deegaanka Somaalida Ethiopia, xaaladiisu waxay maraysaa meel wanaagsan, marka la barbar dhigo sanooyinkii ina dhaafay.
Waxaa la ogsoon yahay in xisbiga ESPDP, talada haya uu keenay guulo lagu faani karo sida; nabadgaliyada, bulshada, waxbrashada, caafimaadka, isgaadsiinta IWM.
Dhinaca kale, xisbiga, madaxda degaanka iyo dawlada dhexeba waxay maal iyo muruqba galiyeen sidii ay u kasban lahaayeen Qurbo-joogta u dhalatay Deegaanka Somaalida Ethiopia, oo aan iyagu hore ula socon waxa ka jira degaanka.
Masuuliyiinta xisbiga ayaa safaro wada tashi ah dhawr goor ku tagay dalalka reer galbeedka, safaradaas oo ay ugu sharxeen Qurbo-joogta in xaalada ka jirta degaanka.
Safaradaasi waxay abuureen jawi ka badalan kuwii hore uga jiray Qurbaha, Qurbo-joog badan ayaa dib ugu laabtay degaanadii ay ka yimaadeen sanooyin badan ka hr.
Ugu damabayn, dhamaan xubnaha Ururka dhalinyarada UDSE] ee San Diego, waxay leeyihiin Xisbiga ESPDP, ee dawlad deegaanka ha noqdo kii ku guulaysta dhinac walba oo la xidhiidha nolosha dadweynah degaanka Somalida Ethiopia.
Dhamaan xubnaha UDSESD